Hupenyu hwesevhisi yemhete yekuisa chisimbiso-CIXI DONGFENG SEALING&PACKING Co., Ltd.
Hupenyu hwebasa remhete yekuisa chisimbiso
Time: 2021-12-24 Hits: 4
Kune hukama hwakawanda hunokanganisa chisimbiso, senge simba risina kuenzana, uye kumanikidzira zvachose. Zvinoenderana nenzira yekuisa mhete yekuisa chisimbiso, kuisirwa nzira dzakasiyana senge flat concave-convex grooves iri.
zvakasiyana, izvo zvingangokonzera kusaenzana kwesimba uye kutsauka kwepakati pesimba.
Kana rumwe rutivi ruchirema uye rumwe rwuri chiedza, ndiko kushanduka kwechigarire kwekumanikidzika kunokonzerwa nekugara kwenguva refu kwesimba, izvo zvakanyanya kuipa. Kana mhete yekuisa chisimbiso ichibviswa zvakare, inogona kunge yakaremara. Rini
kuisa mhete yekuisa chisimbiso, zvakakosha kudzora chiyero uye yunifomu kubatanidzwa kwesimba.
Kunewo zvikonzero zvakawanda: zvimwe zvigadzirwa zvesilicone zvine hupenyu hwesevhisi hwakasiyana zvichienderana nenzvimbo dzakasiyana dzekunze uye zvivakwa, zvinomanikidza kushanda, nezvimwe; imwe ndeyekuti maererano nekusimba kwakasiyana kwezvinhu,
pane zvikonzero zvakawanda zvinogona kukonzera kuiswa chisimbiso. Hupenyu hwedenderedzwa hunova hudiki.
Zvadaro: Zvishandiso zvakajairika uye chiyero chekushandiswa kweO-mhete